LA OGAADAY: Hadalka Uu Jadon Sancho Ciyaartoyda Kooxdiisa Borussia Dortmund Uga Sheeegay Man United Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Hadalka Uu Jadon Sancho Ciyaartoyda Kooxdiisa Borussia Dortmund Uga Sheeegay Man United Oo La Ogaaday.
Waxaa la ogaaday hadal uu bartilmaameedka Man United ee Jadon Sancho u sheegay ciyaartoyda ay isku kooxda Borussia Dortmund yihiin wuxuuna hadalkani muujinayaa in xidiga reer England uu si gaar ah u doonayo Old Trafford.
Man United ayaa muhiimada kowaad ka dhinaysay saxiixa Jadon Sancho laakiin waxaa meel adag isku taagtay kooxda Borussia Dortmund oo iska diiday in ay hoos u soo dhaafto lacagta ay xidigan ku doonayso oo ah ugu yaraan 108 milyan.
War soo baxay ayaa lagu sheegay in tababare Ole Gunnar Solskjaer uu doonayay in heshiiska Jadon Sancho ee Man United lagu dhawaaqo maalintii ay Champions League u soo baxeen dhamaadkii xili ciyaareedka balse ay taas noqotay arin suurtogali wayday.
Sida uu qoray wargayska Daily Telegraph, Jadon Sancho ayaa ciyaartoyda kooxdiisa Borussia Dortmund u sheegay in uu hadda filayo in uu sii joogi doono kooxda Dortmund muddo hal sano oo kale ah haddii ay Man United awoodi waydo in ay heshiis la gaadho maamulka kooxdiisa Borussia Dortmund.
Jadon Sancho waxa uu ciyaartoyda kooxdiisa Dortmund ku war galiyay in isaga lagu qanciyay in uu sanad kale kooxda iska sii joogo haddii Man United ay awoodi waydo in ay gaadho qiimaha ay isaga dul dhigeen.
Kooxda Borussia Dortund ayaa horaantii bishan war rasmi ah ka soo saartay mustaqbalka Jadon Sancho kadib markii la dhaafay waqtigii kama danbaysta ahayd ee ay Man United u qabteen oo ku beegnayd August 10,2020.
Markaas kadib waxay maamulka Dortmund bilaabeen in ay Jadon Sancho si buuxda ugu qanciyeen in uu kooxda la sii qaato xili ciyaareed kale maadaama oo ay Man United wax heshiis ah isla gaadhi waayeen.
Ciyaartoyda Dortmund ee uu Sancho u sheegay in uu kooxdooda sii joogayo ayaa dareenkooda farxadeed muujiyay iyada oo Erling Haaland uu sheegay “Jadon waa ciyaartoy fantastik ah, anigu waxaan aad ugu faraxsanahay in uu isagu sii joogayo”.
Dhinaca kale Axel Witsel ayaa isna joogitaanka Sancho dareenkiisa ka dhiibtay wuxuuna yidhi: “Isagu wuu sii joogayaa isla markaana dhamaantayo waanu ku faraxsanahay”.
Kadib maamulka Dortmund ayaa hore u shaaciyay in mushaarkii Jadon Sancho ay kordhiyeen isla markaana ay ka saxiixdeen heshiis dhacaya ilaa 2023 waxayna taasi keentay in ciyaartoyda kooxdiisa uu hadda u cadeeyay in uu sanad kale sii joogayo haddii ayna United wax heshiis ah la gaadhin kooxdiisa.
In Jadon Sancho uu sii joogi doono Borussia Dortmund xili ciyaareedkan waxay dhibaato dhinaca suuqa ah ku noqo doontaa Solskjaer kaas oo doonayay in 20 sano jirkan uu kooxdiisa ku soo xoojiyo.